people Nepal » हेर्नुहोस् वडाध्यक्षको कार्यालयमा सुत्ने तरिका ! हेर्नुहोस् वडाध्यक्षको कार्यालयमा सुत्ने तरिका ! – people Nepal
हेर्नुहोस् वडाध्यक्षको कार्यालयमा सुत्ने तरिका !
भाद्र १८, रुपन्देही – स्थानीय निकायको निर्वाचन पछि गाउँगाउँमा विकासका लहर पुगेको पार्टीहरूले दाबी गरिरहँदा रुपन्देही गैडहवा गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष भने कार्यालयमा मस्त निन्द्रामा वडाका विकासे सपना देखि रहेका छन् ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उपेन्द्र यादवको सङ्घीय समाजवादी पार्टीका तर्फबाट वडाध्यक्षमा विजयी भएका राम वेलास यादवको कार्यालयमा दिउसै सुत्ने बानीका कारण स्थानीय जनता हैरान भएका छन् ।
उनी बिहान समयमै कार्यालय त आउँछन्, तर, बिहानको खाना खाएर केही छिन आँगनमा सुत्ने बानी परेका उनी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई पर्खाएरै मस्त सुत्ने गरेको स्थानीयको भनाई छ । ‘अध्यक्ष ज्यू सधैँ यस्तै हो हजुर हामीले कतिपल्ट भन्यौं कमसेकम मान्छे आउँदा त अलिक हेक्का राखिदिनु पर्ने हो ।’ एक वडा सदस्यले भने ।
उनको यो हरकत नयाँ हैन, गाउँमा कुनै कार्यक्रम भएको छ भने उनी कुर्सीमा बस्ना साथ उङ्न थाल्छन् । कहिले काँही कार्यालयमै भित्रबाट चुकुल लगाएर सुत्ने गरेको स्थानीयको भनाई छ । उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भाईरल भएको छ । फेसबुक प्रयोगकर्ताले उनको तस्बिरमा कमेण्ट गर्दै राजनीतिमा सही नेतृत्व आउन नसकेको तर्क गरेका छन् ।